Yintoni eluncedo kwi-vitamin E ebusweni?
Isidingo se-vitamin E kwinkqubo yokunyamekela umzimba.
Bambalwa abantu bayazi ukuba i-creams ezibizayo zinokunye okunye kwaye kulungile kwikharinethi yakho. Enye yeendlela zibizwa ngokuba yi-vitamin E, i-tocopherol. Le nkunkuma eluncedo ayisinceda kuphela ukuphucula i-immunity kunye nokunyanga izifo zenkqubo yokuzala, kodwa iphinda ibe yindlela efanelekileyo yokunyusa, ukubuyisela nokuphucula ulusu kunye neenwele.
Ngokuqinisekileyo, abaninzi bethu baye babona kwiiphakheji ezilingayo zazo zonke iindidi zokugcina iimveliso ezicokisekileyo "Nge-vitamin E". Iikhampani ze-cosmetology eziphambili sele zisebenzise le ngxube kwimveliso yazo, ezifanelwe ukuyibulela ukuhlaziywa kwabaxumi babo. Ngoko isiphelo siphumela: kutheni uthenge iziqholo ezibizayo kwesikhumba okanye kwizinwele, ukuba inxalenye ebalulekileyo ye vithamini E ingathengwa kwikhemistri ngenani elikhohlakeleyo kwaye ininzi yenza izicumba kunye nemaski.
I-Vitamin E kwi-cosmetology yasekhaya
Ukuba ubuso bakho bunzima ngenxa yobume, ubuqhetseba, umbala obalahle kunye nemibono emihle - oku kubonakaliso olucacileyo ukuba ulusu ludinga ukunyusa nokunyusa. Yaye iya kuba nakho ukubonelela i-tocopherol. Ngokungafani neoli ye-castor kunye neoli ye-buckthorn yeoli, eye isetyenziselwa le njongo, le nto ayifaki i-pores, kwaye ngoko emva kwesicelo sayo isikhumba sakho siya kuhlala sihlambulukile, singenanto eyodwa. Kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa le vithamini ngempumelelo. Makhe sibone iindlela ezininzi.
Ngoko ke, kule nkqubo, kufuneka udibanise iifomsi ezinhlanu zeoli tocopherol, ushukela okanye ujusi okhuni. Ngaphambi kokusebenzisa i-vitamin oil, isikhumba sobuso sitshatywe ngobusi okanye ushukela. Oku kuyimfuneko ukwenzela ukuba kususwe iinqununu zesikhumba kunye nokuphucula ukujikeleza kwegazi, oku kuya kunceda ukugqithisa ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwezinto ezincedisayo. Emva kokuba inkqubo yokuqhafaza iphelile, sebenzisa i -copherol ebusweni kwaye mime imizuzu eyi-15-20, uze uhlanza ngamanzi afudumele. Ukufaka isicelo kufuneka kube phezu kobuso bonke, iinkophe kunye nemilomo, kubandakanywa.
Indlela yesibini yesicelo kukuba ioli ye vithamini ifakwe kwiifomsile ezilishumi zongezwa kwi-100 gram ye-cream, ejwayele ukuyisebenzisa-oku kuya kuphucula kakhulu kwaye kukhawuleze umphumo. Faka isicelo kusasa nangokuhlwa emva kokuhlamba.
Ukuba ulusu ludinga ukuhluma okulungileyo, sincoma ukwenza imaski nge-vitamin E kunye ne-glycerin. Kule recipe, uya kufuna enye ithisipuni ye-glycerin kunye ne-dessert eyodwa ye-dessert ye-vitamin solution. Olu hlobo lusetyenziswa ebusweni kwisigamu seyure, emva koko kubalulekile ukuba uhlambe.
I-Vitamin E yeNwele
Ukuze wenze iinwele zakho zibe zingqongqo ezincinci, ukuwa kunye nokulula ukunqumla, ungakulibala ukwenza imaski ekhethekileyo kanye ngeveki. Ukwenza oku, udinga i-kefir engenawo amafutha kunye ne-tocopherol ioli ye-5-7 iikhsula. Sifaka olu lwakhiwo kwizinwele kunye nobude obude, emva koko sigubungela ngesikhwama seplastiki. Emva kwemizuzu engama-20, i-mask ne-vitamin E ihlanjululwe kakuhle ngamanzi afudumele. Emva kweenkqubo 3-4 uza kuqaphela ukuba iinwele zakho ziya kuba ngcono.
Ukuqwalasela kwakho, sazisa ii-recipes eziqhelekileyo ukusetyenziswa kwe-vitamin E kwi-cosmetology ekhaya. Ezi ngcebiso ziyakunceda uncinci, kodwa ngexesha elifanayo ukunyamekela imbonakalo yakho ngekhwalithi, ngaphandle kokutyelela i-beautician. Inhlanhla kwaye uyithande!
Uncedo lokuqala: indlela yokufihla ukungapheleli kwesikhumba ngemizuzu elishumi
Indlela yokuziphatha ngayo ibhinqa xa udibana nendoda
Izakhiwo ezifanelekileyo kunye eziyingozi ze-shish kebab
Quesadilla kunye neembotyi kunye noshizi
Ziziphi iinyanga zenyanga ezilungileyo zokunqunyulwa?
Iipancakes kwi yogurt
Izinto ezichaphazela uluntu lwentlalo
Ukuhamba ngeefayfir. Indlela yokwenza ii-pie ezihlwaya kwi-kefir
Ucoceko olusondeleyo lwentombazana esandula